Ukwenza i-Akhawunti: ezona nkqubo zilungileyo zokusebenzisa Ubuntu | Ubunlog
Iinkqubo zokuhambisa ingxelo kwi-PC yakho kunye no-Ubuntu
IPablinux | 18/06/2021 11:35 | Ukuhlaziywa ukuba 18/06/2021 12:46 | software, Ubuntu
Kwiinyanga ezidlulileyo, uninzi lwethu luye lwafunda, lwaqinisekisa, okanye lwaqala ukucacisa ukuba impilo ibaluleke kakhulu. Ngaphandle kwempilo elungileyo akukho nto sinokuyenza, kodwa xa siphila eluntwini, kufuneka sikhathalele noqoqosho. Gcina iincwadi Kubalulekile, ngakumbi kumqeshi, kodwa kutshanje sifundile ukuba ayonzakalisi into yokuba siyenze sonke, kuba ukuthintela kungcono kunokunyanga ukuze ungafumani isimanga esibi emva kokubuyela umva.
Nje ukuba sicace ukuba ukugcina i-accounting ngumbono olungileyo, ngoku kufuneka sikhumbule inkqubo yokusebenza enika le bhlog igama layo. Ubuntu busebenzisa i-Linux kernel, kwaye abaphuhlisi abasisebenzisi kangako njenge-macOS, kungaphantsi kweWindows. Nangona kuyinyani ukuba unokufumana isoftware ekumgangatho ophakamileyo yeLinux, okanye ngakumbi ngakumbi ukuba inkampani ethembekileyo ikhuphe isoftware yethu, eyona ixhaphakileyo kukufumana isoftware yasimahla eyenziwe luluntu, phakathi kwazo ezi zinto zilandelayo zibonakala.
Sishiya uluhlu kunye nesoftware yasimahla onokuyisebenzisa ku-Ubuntu, kodwa ukuba ufuna usetyenziso oluthe ngqo okanye oluphambili, sukuyalela ukusebenzisa Inkqubo yobalo, esinokuthi ngayo sifumane yonke imisebenzi kunye nenkxaso ephuculweyo.
1 Ukwenza i-Akhawunti: ezona nkqubo zi-10 zibalaseleyo zeBuntu
1.6 Umphathi weMali Ex
2 Ukwenza i-Akhawunti ku-Ubuntu simahla, kwiindawo zokugcina ezisemthethweni ... okanye kwisikhangeli
Ukwenza i-Akhawunti: ezona nkqubo zi-10 zibalaseleyo zeBuntu
Zonke (phantse) isoftware esiza kuyifaka kolu luhlu Ikwiindawo zokugcina ezisemthethweni zeBuntu, inokufakwa kwiziko lesoftware.
Enye yezona zikhetho zibalaseleyo xa sifuna ukugcina ingxelo kwiLinux yile GnuCash. Ikho ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye ine imisebenzi efunekayo ukuyenza ibe yinkqubo efanelekileyo yokugcina ukugcinwa kweencwadi kumashishini amancinci naphakathi. I-GnuCash ixhasa iimali ezininzi, ungayibona imarike yestokhwe evela kwinkqubo enye kwaye isimahla kwaye ivulekile, ke abanye abaphuhlisi banokwenza isoftware kuyo.
IkhayaBhin Ikwanemisebenzi emininzi eya kusivumela ukuba sibhale phantsi yonke imicimbi yethu kwaye sigcine ingxelo yobalo-mali lwethu. Inonxibelelwano olunomdla kakhulu, ke igophe lokufunda lincinci kwaye sinokulawula zonke iindleko zethu nje ukuba siqale isicelo. Isebenza ngokugqibeleleyo ku-Ubuntu kunye nolunye usasazo lweLinux, kwaye nayo Ulwazi lunokungeniswa kwi-Quicken, iMicrosoft Money kunye neminye imigangatho. Ukongeza, inomsebenzi wokuthintela iimpinda, into esoloko ibalulekile kwiifayile nangakumbi xa into esiza kuyenza kukugcina iiakhawunti.
Kwakhona elula kwaye enembile KMyMoney. Ukuba inkqubo yeLinux ine-K, inokuba yaphuhliswa yi-KDE, njengoko kunjalo. Njengayo yonke into ephuhliswayo yile projekthi, i-KMyMoney igcwele amanqaku, kwaye ine Uyilo olulungileyo olubukeka luhle, ngakumbi kwiPlasma.
Njengoko besesitshilo, ukuba inkqubo ine-K, mhlawumbi yi-KDE, kwaye iprojekthi ikwaphucula iSkrooge. Le nkqubo ihlaziywa rhoqo kuneKMyMoney, kodwa incinci intuitive ukuyisebenzisa. Ngamanye amaxesha xa kukho into enomjikelo wokufunda omncinci kancinane, into esinayo isesandleni into epheleleyo ngakumbi, Kwaye iSkrooge ifana ne-vitaminM KMyMoney. Phakathi kwezi zimbini, esi sesibini sibonelela ngamathuba amaninzi, kodwa eyangaphambili inokubaluleka ukuba into esiyifunayo yimisebenzi esisiseko kunye nokusebenziseka lula.
IGrisbi yenye yesoftware evulekileyo yesoftware yokusebenza kweLinux. Inoluhlu olukhulu lweempawu zabasebenzisi abafuna, zonke zibandakanyiwe emva kofakelo ukusuka ekuqaleni, kunye nokujongana kwayo okulula kwaye okuhle kwenza ukuba ukubalwa kwemali kube lula kwaye kube lula Nge-Grisbi sinokulawula ngokulula iiakhawunti ezininzi, iimali kwaye unakho ngenisa idatha kwiQIF, OFX okanye kwiGnuCash esikhankanye ekuqaleni kolu luhlu. Ukongeza, ukuba siyayifuna, iyasivumela ukuba sicwangcise ukuthengiselana kwangaphambili.
Umphathi weMali Ex
Ukuba ujonga eli gama kwiziko lesoftware yenkqubo esekwe ku-Ubuntu, awuyi kuyifumana. Ikho, kodwa iphakheji kunye nesicelo ziyavela phantsi kwegama le-mmex. Nje ukuba ifakwe, iManejala yeMali ye-Ex okanye i-mmex sisisombululo esinamandla kakhulu sokugcina i-accounting yakho kwiinkqubo ezisebenza ngeLinux. Inenani elikhulu lemisebenzi ukwenzela ukuba abasebenzisi abangengobungcali bangangcolisi iiakhawunti kwaye babonelele ngokusebenza kakuhle. Umphathi weMali Ex liqonga elinqamlezileyo, kodwa ngumthombo ovulekileyo, ifayile ye- idatha ibhalwe nge-AES kwaye inokusetyenziswa, umzekelo, kwi-USB okanye usetyenziso lweselfowuni. Gqibezela, le «mmex».
Eqonomize! yenye isoftware zenzelwe i KDE desktop, kodwa inokufakwa nakweyiphi na incasa Ubuntu. Inemisebenzi emininzi eboniswe kwindawo yomsebenzisi "enobuntu" ukunceda abasebenzisi abangafundanga ukuba baphathe iiakhawunti zabo ngaphandle kobunzima. Ayisiyo inkqubo eyilelwe abona basebenzisi okanye abanobuchule, kodwa ilungile kwabo bafuna ukubhala phantsi igalelo kunye neziphumo kwaye bajonge iigrafu ezithile.
Esi sicelo senzelwe ukugcina iiakhawunti zakho, kodwa sinokusetyenziselwa enye into. Iqonga lomnqamlezo kwaye ivumelanisa idatha kwilifu ngokufihla. Ilula kakhulu ukuyisebenzisa, ixhasa iimali ezininzi, ungongeza iindidi zesiko, iilebheli, inokungeniswa okanye ithunyelwe ngaphandle kwifayile ye-CSV kwaye ikwanazo nezicelo zeselfowuni. Ngokusisiseko, nangona singayisebenzisa ku-Ubuntu, injengefayile ye- sicelo se sithuthi ukugcina i-accounting ekwafumaneka kwiLinux, kwaye sele siyazi ukuba kutshanje usetyenziso lweselfowuni lubonelela ngeendlela ezininzi kwaye kulula ukuzisebenzisa.
Le ayisiyiyo isoftware yobalo, kodwa inokusisebenzela kwaye yiyo ifakwe ngokungagqibekanga ku-Ubuntu kunye nezinye iinkqubo zokusebenza ezisekwe kwiLinux. I-Calc yisoftware yespredishithi evela kuXwebhu lweSiseko, kwaye kwabo sele besazi ukuyisebenzisa, ukongeza ulwazi kwiCalc nokwenza iigrafu kukucofa nje okumbalwa. Umntu othile ukuxelela ukuba, ngaphandle kokusebenza neenkampani zolawulo, wayisebenzisa ukwenza izinto zicace.
Kwaye siphelisa uluhlu ngo-Akaunting, indawo yasimahla nevulekileyo efumanekayo kwiLinux, kodwa nayo nayiphi na enye inkqubo yokusebenza enesikhangeli sewebhu esixhaswayo kuba inkonzo online. NjengoMonento evela kwi-mobile app, iAkaunting inoyilo olulungileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa kuba sisicelo sewebhu, kodwa ayipheleli apho, kodwa isivumela ukuba sibhale phantsi ukuthengiselana, senze ii-invoice, iirisithi kunye neengxelo, thatha jonga iindleko… yonke into, nayo yonke into evela kwisikhangeli.
Ukwenza i-Akhawunti ku-Ubuntu simahla, kwiindawo zokugcina ezisemthethweni ... okanye kwisikhangeli
Yonke into evezwe apha yile software free engenakusetyenziswa kuphela ku-Ubuntu, kodwa ikwiindawo zokugcina ezisemthethweni, kwimeko yeCalc efakwe ngokungagqibekanga, okanye ukubalwa kwemali kunokwenziwa kwisikhangeli, njengakwimeko yeAkauting. Ukuba simahla kuthetha ukuba abaphuhlisi bayo abalindelanga ukuhlawulisa ngomsebenzi wabo, ngaphaya kokufumana iminikelo okanye utyalo-mali kumntu ofuna ukunceda iprojekthi, kwaye nokuba bangangabi namandla njengabanini bamashishini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Iinkqubo zokuhambisa ingxelo kwi-PC yakho kunye no-Ubuntu
IJupyter Notebook, yenza kwaye wabelane ngamaxwebhu avela kwi-Ubuntu 20.04